ဝိညာဉ်မီးအိမ်(ခရစ်ယာန်စာပေစုစည်းမှု) - မူလစာမျက်နှာ
"၀ိညာဉ်မီးအိမ်"သန်းခေါင်ယံထက်ညဉ့်မနက်ပါရှုပ်ရှက်ခတ်လွန်းတဲ့လောကထဲမှာကမ်းကိုမမြင်၊ လမ်းကိုမမြင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းမမြင်ဘယ်ဟာကအဖြူ၊ ဘယ်ဟာကအမဲဘာတွေကတော့အကောင်း၊ဘာတွေကတော့အဆိုးဝေခွဲမရနိုင်တော့တဲ့အဆုံးထင်ရာကိုစိုင်းပြီး၊ သမိုင်းကိုအရှုံးနဲ့နိဂုံးမလှတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ၊သင်မကြုံရလေအောင်မေတ္တာအလင်းလေးနဲ့၊ကူညီလှချင်။ရွေးချယ်ရမှာက ကိုယ့်အပိုင်းလမ်းပြပေးဖို့က ဒို့အပိုင်းမျှတတဲ့တရားနည်းလမ်းနဲ့ဝိညာဉ်မီးအိမ်။
၀ိညာဉ်မီးအိမ်(ခရစ်ယာန်စာပေစုစည်းမှု) Spiritual-Lantern: Email; prophetlay4@gmail.com.
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြသည်ဟုမဆို။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်၍ ငါတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်း ငှာသားတော်ကို စေလွတ်သောအရာ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ၏။(၁ယော၊ ၄း ၁၀)
● သဘာဝဘေးဒဏ်ခံစားနေသူများ● ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူများ● ငတ်မွတ်ခြင်းဘေးခံစားနေရသူများ● မိဘမဲ့ကလေးငယ်များ● စစ်မက်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူများ● လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးပဋိပက္ခများ● ခရစ်တော်မေတ္တာကိုလူတိုင်းရရှိရန်
● နေ့စဉ်ခွန်အား(မြန်မာ) » ● Our Daily Bread (English) »● နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ် »● BWA ကမ္ဘာ့နှစ်ခြင်းသဟာရ »● World Council of Churches »● ယုဒဿန်သမ္မာကျမ်းစာ(မြန်မာ) » ● မြတ်မင်္ဂလာသတင်းကောင်း »● သက်ကြီးသမ္မာကျမ်းစာ »● ၀ိညာဉ်မီးအိမ်ဘလော့ »● Facebook »● Facebook Like Page »● Facebook Group » "စာမူဖိတ်ခေါ်ခြင်း"
မိတ်ဆွေတို့ရေ.ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာ.ဘုရားသခင်ရဲ့.ဖွင့်ပြချက်တွေကိုဝေငှချင်တယ် ဆိုယင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း စာမူ များပေးပို့ နိုင်ပါတယ် ပေးပို့နိုင်တဲ့ စာမူ များကတော့ ကဗျာ၊၀တ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ပြီးတော့ သမ္မာကျမ်းစာ သင်ခန်းစာ၊ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ပိုင်တရားဟောချက်များ အတင်းမဟုတ်တဲ့ ဓါတ်ပုံပါတဲ့သတင်း တွ၊ ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ သိစေဖို့ ကြော်ငြာတွေကို လည်းပေးပို့ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Internet Con- nection အခက် အခဲတွေကြောင့် ကိုရေးတဲ့စာမူချက်ချင်း လက်ငင်းပါမလာ ဘူးဆိုယင်လည်း နားလည်ပေးဖို့ကြို တင်တောင်းပန်ပါရစေ။ နောက်ပြီးတစ် ခုတောင်းဆိုချင်တာကတော့ စာမူပေး ပို့သူရဲ့ အမည်၊ ဖုံးနံပါတ် ၊နေရပ်လိပ် စာကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးစေချင်ပါ တယ်။ဒါတော့ ကျွန်တော့အတွက်ပါ။ ပေးပို့ရမဲ့လိပ်စာကတော့... prophetlay4@gmail.comသို့စာရေးဆက်သွယ်ပြီးပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Get the Starting With God ? Grow in your relationship wit widget and many other great free widgets at Widgetbox!
ဤစာမျက်နှာပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မျက်မှောက်ခေတ်လောက ကြီးသည်အဆိုးနှင့်အကောင်း၊ အစစ်နှင့်အတု၊ အဖြူနှင့်အမဲ၊ အလင်းနှင့် အမှောင်တို့ကိုတော်ရုံဖြင့် ခွဲခြားမ ရနိုင်သောခေတ်ကာလဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ခွဲခြားမရသော အမှောင်ထုကြီးနှင့် အလားသဏ္ဍန်တူနေသည့်လောကကြီး အလယ်လျောက်လှမ်းအသက်ရှင်သန်ရာတွင် အစဉ်သတိဝရိယရှိရန် အရေးတကြီးလိုအပ်နေစဉ် ၀ိညာဉ်မီးအိမ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လူသားတိုင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်း မာခြင်းရှိစေရန်ရည်ရွယ်လျှက် ခရစ်ယာန်အမှုတော်ဆောင်ကြီးများ၊ ဆရာသမားများ တို့၏ ပါဝင်ဆက်ကပ်ထားသော ခရစ်ယာန်စာပေများကိုစုစည်းပြီး မိတ်ဆွေတို့ဝိညာဉ်ခွန်အားယူရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။